आफुले स्वघोषणा गर्दा अध्यक्ष बन्न पाईने अनौठो नियम कहाँबाट सिक्नुभयो : थपलिया
प्रकाशित मिति: 2016/09/25
असोज ९, काठमाण्डौ । ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्मा केही दिनयता नेतृत्वको बिवाद चुलिएको छ ।
परिषद्को २१ औ र २२ औ साधारणसभा स्थगनको बिषयलाई लिएर असन्तुष्ट तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ समुहले छुट्टै भेला गरी कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा समिर गुरुङलाई अगाडि सारेको स्थीति छ, भने अध्यक्ष रामशरण थपलियाले भने बहुमत कार्यसमितिले साधारणसभा स्थगीत गरिसकेको स्थीतिमा छुट्टै आफुखुसी झुण्ड तयारी गरी गरिने निर्णयको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन ।
यही सन्दर्भमा ठमेलमा देखिएको नेतृत्व बिवाद र समाधानको बाटो पहिल्याउने कोसिस गरेका छौ, प्रश्तुत छ, ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलियासँग गन्तव्य नेपालका शंकर गौलीले गरेको अन्र्तवार्ता जस्ताको तस्तै ।
ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्मा देखिएको बास्तबिक बिबाद के हो ?
ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्को २१ र २२ औ बार्षिक साधारणसभामा ५ वटा बुंदामा परिषद्ले बिधान संसोधन अगाडि बढाएकोमा परिषदको कार्यसमिती बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरेको थियो । यद्यपी अध्यक्षको दुई कार्यकालमा बिधान संसोधन गरी खारेज गर्ने सम्बन्धमा भने असन्तुष्ट पक्षका २ सदस्यले असहमति राख्दै आएका थिए ।
यद्यपी सबै साथीहरुको धारणाबुझ्ने क्रम जारी रहँदा अहिले जो साथीहरु असन्तुष्ट समुह भन्दै कराउँदै हिड्नुभाछ, उहाँहरुले छुट्टै भेला गर्दै हिड्ने र केबल छलफलको बिषयको रुपमा मात्रै ल्याईएको बिषयमा उहाँहरुले अध्यक्षको बिरुद्धमा बक्तब्य दिदै हिड्न थालेपछि यही बिषयका कारण संस्था फुट्नु हुदैन, र बिवाद हुनु हुदैन भनेर तत्काल असोज २ गतेका लागि बोलाईएको साधारणसभा बहुमत कार्यसमितीले स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि असन्तुष्ट तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठको समुहले छुट्टै गुटको भेला गरि केही सदस्यहरु जम्मा गरेर समिर गुरुङलाई अध्यक्ष भएको घोषणा गर्नुभयो । जुन अबैधानिक त छ नै, जसलाई जुनबेला अध्यक्ष बन्न मन लाग्यो त्यो बनिहाल्ने र आफुले स्वघोषणा गर्दा अध्यक्ष बन्न पाईने अनौठो नियम कहाँबाट सिक्नुभयो, मलाई थाहा छैन । प्रत्येक संस्थाको नियम, बिधानहरु हुन्छन, त्यसमा परिषद्को बिधान पनि सबैका लागि उपलब्ध छ, बिधानसम्मत चल्न साथीहरुलाई आग्रह गर्छु, उत्तेजना र उक्साहटले दुर्घटना र चिन्ता भन्दा अन्य कुरा प्राप्त हुदैन । यसलाई उहाँहरुले बुझ्दा राम्रो ।
तर तपाईले परिषद्को साधारणसभा बोलाईसकेपछि पछि हट्नुभयो, साधारणसभाले गरेको निर्णय नमान्ने भए किन साधारणसभा बोलाएको भन्ने आरोप पनि छ नी ?
यो हास्यास्पद छ । बिधान संसोधनको सामान्य छलफल मात्रै चल्दा असन्तुष्ट तेजेन्द्र समुह आत्तिएको देखेपछि संख्यामा कम भएपनि सकेसम्म संस्थाको एक जनाको पनि चित्त नदुखाउँ भन्ने धारणाले नै साधारणसभा स्थगित गरिएको हो । नकी उहाँहरुसँग डराएर साधारणसभा स्थगित गरिएको होईन ।
तेजेन्द्र जी हरुलाई थाहा होस की साधारणसभा स्थगित गर्ने निर्णय ७० प्रतिशत कार्यसमिती सदस्यहरुबाट पास भएको हो, थपलियाले एक्लै गरेको होईन । यसो भनिरहँदा बहुमत कार्यसमिती मेरै पक्षमा भएको स्थीतिमा चाहँदा बिधान संसोधन पनि संभब थियो । यद्यपी अघि नै भने हामीले त्यसो गर्न चाहेनौ ।
जहाँसम्म तपाईले प्रश्न उठाउनुभयो, साधारणसभा आयोजना गरेर किन पछाडि हटेको, कारण यही थियो संस्था मिलाएर लैजाउँ । अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो साधरणसभाको निर्णय मान्न मलाई अप्ठेरो हैन । तर यहाँ साधारणसभा कसले कहाँ गर्यो मलाई थाहा छैन । यसकारण यो के निर्णय, कस्तो निर्णय, बन्द कोठामा बसेर कुन व्याक्तिको मनमा के उब्जियो परिषद्को लागि त्यो चासोको बिषय होईन, थिएन र छैन । मलाई यतिमात्र थाहा छ, संस्थाको आधिकारिक अध्यक्ष म हुँ, रामशरण थपलिया । असोज १ गते बहुमत कार्यसमितीको बैठकले साधारणसभा स्थगित गर्यौ, सोको जानकारी सबै सदस्यलाई औपचारिक रुपमा गरायौ, दैनिक पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसबाट सक्दो जानकारी सबैमा पुगेको स्थीति हो । संस्थाको आधिकारिक निर्णय आईसकेपछि अरुले के गर्छन, त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला, मेरो चासोको बिषय होईन ।
असोज २ गते साधारणसभा स्थगित नभएको र दुईतिहाईबाट यहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौं भनेर स्वयमं आफुलाई कार्यबाहक अध्यक्ष भन्ने समिर गुरुङले भन्नुभएको छ, अनि ?
यो निराधार कुरा हो । मैले अघि नै भने आत्मरतिमा रमाउने अधिकार सबैमा छ, तर बास्तबिकतामा फर्कदा यर्थाथ स्थीतिकोे चेत खुल्ने भएकाले फेरी पिडा हुनसक्छ । उहाँहरु भ्रममा हुनुहुन्छ, जस्तो लाग्छ, कि सपना देख्नुभयो मलाई थाहा छैन ।
यहाँले ७० प्रतिशत कार्यसमिति सदस्यको हस्ताक्षर हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले साधारणसभा स्थगित गर्ने निर्णयमा मत दिएका छन । अर्को कुरा साधारणसभा बस्नकै लागि पनि ५१ प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थीत हुनुपर्छ, सामान्य हिसाब लगाउनुस ७० प्रतिशत स्थगित गर्ने पक्षमा र मानौ बाँकी सबै उहाँहरुको पक्षमा जानुभएछ भने पनि ३० प्रतिशतले साधारणसभा कसरी सम्भव भयो । यसलाई साधारणसभा भनेर परिषद्को बिधान अपबित्र नपारौ । बिधान पढ्न पनि उहाँहरुलाई आग्रह गर्छु, यसकारण म यसबारेमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न ।
तर तेजेन्द्र समुहले होटल मल्लमा भेला गरेको भनेर त सञ्चारमाध्यममा नै आएको छ नी, तपाई हैन, भन्दैहुनुहुन्छ ?
हेर्नुस, मैले परिषद्ले औपचारिक रुपमा साधारणसभा गरेको छैन, भनेर भनेको हु । छैन, हैन, यही शतप्रतिशत सत्य हो । तर मैले उहाँहरुले कुन होटलमा के बैठक गर्नुभयो, के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो हाम्रो चासोको बिषय होईन । कुनै व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गर्ने मेरो क्षमता र अभिप्राय पनि छैन ।
तर कुरा के भने संस्थागत निर्णय साधारण सभा भएको हैन, छैन, उहाँहरुलाई मन लाग्यो भनेर हुने कुरा पनि होईन ।
अर्को मुख्य कुरा प्रशंगबस यहाँले उठाउनुभयो । असोज २ गतेका लागि होटल मल्ल ठमेलमा नै साधारणसभाका लागि हल बुकिङ हामीले गरेका हौ । तर स्थगित गर्ने बहुमत कार्यसमितीको निर्णयसँगै उक्त हल हामीले रद्ध गरेका हौ । अब त्यही हलमा तेजेन्द्र समुहले समिर गुरुङलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनायो अरे, भन्ने कुराका पछाडी कुनै दम छैन । होटल रद्ध गरियो होटल सञ्चालकलाई औपचारिक जानकारी दिईएको छ । यसअघि नै भने सबै परिषदका सदस्यहरुलाई जानकारी दिईएको थियो । त्यतिमात्रै नभएर असोज २ गतेको हिमालयन दैनिक, अनलाईन, फेसबुक, एसएमएस आदि सबैमा स्थगनको जानकारी दिईसकेको स्थीतिमा कसलाई के रहर लाग्छ, यो मेरो चासोको बिषय होईन ।
यदि त्यसो हो भने तपाईसँग तेजेन्द्र समुह असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण के त ?
मलाई थाहा छैन, त्यो उहाँलाई थाहा होला । तर जहाँसम्म तेजेन्द्र जिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो ठमेलमा बढ्दो लोकप्रियता र प्रभाब उहाँलाई असह्य भएको हुनसक्छ । बलजफ्ती होईन सर्बसहमतिय रुपमै ठमेलमा दुई कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले, ठमेलका व्यावसायीको पिर मर्का मेरो क्षमताले भ्याएसम्म बुझ्ने कोशिस गरेको छु । व्यावसायी, ठमेलका घरधनीका अप्ठेराबारे सोधीखोजी गर्ने काममा म हिजो पनि थिए, आज पनि छु, भोलि पनि रहनेछु । त्यसको बदलामा उहाँहरुले मलाई बिश्वास गर्नुभएको छ, मैले त्यसलाई सम्मान गर्नैपर्छ । यसअर्थमा तेजेन्द्र जीलाई हिजोका दिनमा निर्वाचनमा पराजित हुनपरेको मानसकिताले पनि काम गरेको होला, यस अर्थमा बैधानिक बाटोबाट थपलियालाई हटाउन नसकिने भयो भन्ने जब तेजेन्द्र जी र उहाँका झुण्डहरुलाई महशुस भयो, साधारणसभाको बिषयलाई किचलो बनाउन सुरु गर्नुभयो । तर म उहाँलाई चुनौति दिन चाहन्छु, कुनै पनि तरिका अपनाएर बैधानिक तबरबाट मलाई हटाएर देखाउनको लागि । यो मेरो धम्की र उक्साहट नभई समग्र ठमेलबासीले देखाएको सद्भाव र मायाको आडमा भनिरहेको छु ।
यसमा तेजेन्द्र समुहको उक्साहटमा समिर गुरुङ जी पर्नु भएको छ । उहाँलाई कार्यबाहक अध्यक्ष भन्दै प्रचार गरिएको छ, बिधान उहाँले पनि पढ्नुभएकै होला, किनभने उहाँपनि बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति हुनुहुन्छ, हिजोका दिनमा हामीले नै मिलेर बनाएको परिषद बिधान उहाँले कुल्चन हिम्मत गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन । उहाँको म खास दोश देख्दिन । किनभने कुनैपनि व्यक्तिलाई केही समय भ्रममा राख्न सकिन्छ, तर भ्रम हट्ने बित्तिकै सबै कुरा मिलेर आउनेछन ।
तर थपलियाले संस्थाको हित बिपरित काम गर्यो, नहटाई भएन भनेर लाग्नुभाछ, उहाँहरु, अनि ?
(केही छिनको सोचाईमा ).......... हो यहाँले ठिकै भन्नुभयो । मैलै केही गल्ती अवश्य गरेको छु । तर ति गल्ती कस्ता भने हिजो ठमेल पर्यटन बिकास परिषद स्थानिय तहमा थियो, मेरै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म परिचित गराएँ । दाताहरुबाट डोनेसन ल्याउन र माग्न सक्ने हैसियतका साथै परिषद्को गरिमालाई बढाउने मेरो कदम नपच्नेहरुका लागि यो भन्दा ठुलो अपराधबोध अरु केही हुनै सक्दैन ।
यत्ति भन्न चाहन्छ, जानेर आजसम्म परिषद्को बिरुद्धमा गएको छैन, गुटबन्दी र व्यावसायीको बिश्वास डगमगाउन दिएको छैन, ठमेल क्षेत्रका सबै मानिसहरुका लागि भरोसा योग्य व्यक्ति बन्ने कोसिस मेरो हिजो पनि जारी थियो आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ ।
अँ.... एउटा गल्ती व्यावसायीले बिरोध गरेका व्याक्ति जो तेजेन्द्र जिकै समुहका थिए, पदाधिकारीमा पनि बस्ने, परिषद्को नियम नमान्ने र संस्थाको गोपनियता तेजेन्द्र जिलाई पुर्याउन खटिएका व्यक्तिका कारण पनि अहिलेको तनाबको स्थीति बेहोर्नुपरेको प्रति आफैप्रति थोरबहुत ग्लानी हुन्छ । किनभने परिषद्मा बसेर परिषद्कै जरो उखेल्न खटिएका केही झुण्डको मनमा के थियो बेलैमा बुझ्न सकिएन ।
त्यसो भए परिषद्को बिबाद समाधानको बाटो चै के त ?
सहमतिका लागि म हरदम तयार छु । तर आत्मस्वाभिमान बन्दकी राखेर होईन, उहाँहरुलाई अध्यक्ष बनाएर वा कुनै पदको बार्गेनिक गरेर होइन । चित्त नबुझेका बिषय बैधानिक बाटोबाट समाधान गर्न ठमेल पर्यटन बिकास परिषद् कार्यलय छ । कुनै बन्द कोठा र होटलको जरुरत छैन ।
चैत्र १५ सम्म मेरो कार्यकाल हो । त्यसअबधीसम्म अध्यक्षको पदमा रहनु मैले २० औ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्बिरोध हुँदा पाएको नैतिक अधिकार हो । चैत्र १५ मा साधारणसभा गरि नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछु । उहाँहरु जो असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अहिले हल्ला गर्ने भन्दा नेतृत्व क्षमताको परिक्षण गर्न अनुरोध गर्छु ।
साधारणसभा स्थगित भनिसकेपछि र सिडियोमा त्यसको आधिकारिक निर्णय पठाईसेपश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि रोक्नुभनेको स्थीतिमा के आधारमा उभिएर हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई शान्त दिमाखले सोच्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यहाँ अध्यक्ष रामशरण थपलिया हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न भन्दा पनि तेजेन्द्र जि जस्ता व्यक्तिको उक्साहटमा समिर गुरुङ जी हरु परिरहने स्थीतिको नजिर अन्य पर्यटकीय संस्थामा पनि पर्न थाल्यो, केही झुण्डको बलमा संस्थाका अध्यक्ष फेरिदै जाने स्थीति निर्माण हुन्छ की भन्ने चिन्ता मात्रै हो । अन्यथा पदमा रहिरहनुको मेरो कुनै चाहा हैन । किनकी दुईकार्यकाल समग्र ठमेलबासीको सद्भाव पाउनु पनि चानचुने कुरा होईन जुन मैले सफलताका साथ निर्वाह गरिसकेको छु । बर्तमानमा समस्त ठमेलको भरोसाको केन्द्र परिषद तालाबन्दी रहनुपर्ने स्थीति आफैमा लज्जास्पद छ, यसमा उहाँहरुको भुमिका कति भन्ने कुरा पनि शान्त मनले सोचे थाहा होला । अतः मलाई लाग्दैन उहाँहरुको जुन खालको अपवित्र नजिर छ परिषदमाथि, त्यसमा जिल्ला प्रशासनले उहाँहरुको निर्णयमा साथ दिनेछ । यही भन्न चाहन्छु, सहमति आवश्यक हो, छ । ठमेलप्रतिको आफ्नो भुमिका हामी सबैले मनन गर्यौ भने, निकास टाढा छैन ।
थपलिया ठमेल पर्यटन बिकास परिषद्का बर्तमान अध्यक्ष हुन
प्रश्तुती :शंकर गौली